जान्नुहोस्, कसरी खुवाउने बच्चालाई खानेकुरा? - Everest Dainik - News from Nepal
जान्नुहोस्, कसरी खुवाउने बच्चालाई खानेकुरा?
काठमाडौं, चैत ९ । बच्चालाई खाना खुवाउनु मुस्किल काम हो। तर, यसमा लापरवाही गर्ने हो भने बच्चामा न्युट्रिसनको कमी हुन सक्छ, जसको प्रभाव जीवनभर देखिन सक्छ। यहाँ बच्चालाई खाना खुवाउने केही टिप्स दिइएको छ।
एक अध्ययन अनुसार खानेकुरा खान नखरा देखाउने बच्चाका अभिभावकले प्रेसर दिने वा लोभ देखाउने गर्छन्। यसो गर्दा बच्चाको बानी बिग्रन सक्छ। अथवा उनीहरूको अनहेल्दी खानेकुरामा रुचि देखिन सक्छ, जसका कारण उनीहरूको तौल बढ्न सक्छ। बच्चाहरूको यो बानी सुधार्न यी टिप्न अपनाउन सकिन्छ।
– बच्चाहरू सानो छँदा बच्चाहरूलाई सकेसम्म बढी न्युट्रिसन खानेकुरा दिनुपर्छ। ताकि उनीहरूको शारीरिक विकासका लागि आवश्यक पोषक तत्व पाउन सकुन्।
– यदि बच्चाले खान नखरा देखाए उसलाई इग्नोर गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त तरिका हो। नत्र उनीहरूको व्यवहार बदलिन सक्छ।
– हरेक दिन बच्चालाई एउटै समयमा खानेकुरा दिनुपर्छ। यसो गरे त्यही समयमा उसलाई भोक लाग्छ र उसले नकार्ने सम्भावना हुँदैन।
– बच्चालाई खानेकुरा खुवाउने ठाउँमा टिभी तथा खेलौना हुनुहुँदैन। नत्र बच्चाको ध्यान यसप्रति जान सक्छ।
– बच्चा अलि ठूलो भए उनीहरूसँग खाना बनाउन मद्दत पनि लिन सकिन्छ। उनीहरूलाई भान्साकोठाको स–सानो काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसले उनीहरूको खानाप्रति रुचि बढाउन मद्दत गर्छ।
– बच्चाको फुड आइटमलाई राम्रोसँग डेकोरेट गरिदिनुपर्छ, यसले उनीहरूलाई लोभ्याउँछ।
याे पनि पढ्नुस यस्ता छन् तरकारी तथा फलफूल खानअघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा
ट्याग्स: children foods, health information